Ducooyinka axdiga ee Nicmada | TILMAAMAHA SALAADA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Ducooyinka axdiga ee fadliga leh
Ducooyinka axdiga ee fadliga leh
Maanta waxaan la macaamili doonnaa salaadda axdiga ee raalli ahaanshaha. Nicmada Eebbe waxay joojisaa shaqada nolosha aadanaha. Nicmada waxaa la dhihi karaa waa duco aan loo baahnayn, naxariis, dallacsiin, ama aqoonsi. Waxyaabaha ragga kala fogeeya waxaa ka mid ah nimcada Eebbe. Markii raalli laga noqdo inuu ku hadlo nolosha nin, wuxuu ku shaqeeyaa xawaare iyo jihayn. Waxaa jira heer dardargelin ruuxi ah oo la shaqeeya nin aad loo jecel yahay.
Sidoo kale, marka Eebbe nin u naxariisto, naxariista ayaa u hadasha qofka noocaas ah. Tani waa sheekada Boqorad Esther. Waxay ummaddii ku badbaadisay nimcada Eebbe. Esteer laguma casuumin barxadda boqorka, waana fal karaahiyo ah oo geeri ka dhalan kara in qof kasta soo galo barxadda boqorka iyada oo aan boqorku casuumin. Iyada oo la eegayo in dadkeedii la baabbi'in lahaa, Esteer waxay gashay barxadda boqorka iyada oo aan la casuumin. Si kastaba ha ahaatee, halkii ay xukumi lahayd ayaa loo roonaaday oo boqorkii wuu maqlay.
Xusuuso in Qorniinku ku sheegay kitaabka Maahmaahyadii 16: 7, Markii nin jidadkiisu ku farxo Rabbiga, Wuxuu ka dhigaa xataa cadaawayaashiisa inay isaga la nabad galaan. Dhammaanteen waxaan u baahanahay nimcada Ilaah nolosheena. Dagaalladaas aad la dagaallanto, dhibaatadaas iyo dhibaatooyinka aad la kulanto hadda iyo ka dib shaqada, dhammaantood waa la xallin doonaa marka raalli ahaanshaha Ilaah lagu dhaqaajiyo noloshaada. Tani waxay sharraxaysaa sababta salaadda axdiga ee raallinimada ay aad muhiim ugu tahay qof walba.
Maxay ka dhigan tahay salaadda axdiga ee fadliga leh? Waxay la macno tahay inaan u duceyn doonno dhaqangelinta axdiga Ilaah ee raalli ahaanshaha ereyadiisa. Waxaa jira meelo badan oo Qorniinka ah oo Sayidku ballanqaaday inuu noo hiillin doono, waxaan ku geli doonnaa heshiiskaas salaadda. Waxaan ku amrayaa naxariista Rabbiga; waxaad ku farxi doontaa magaca Ciise.
Sayidow, waxaan kuugu mahadnaqayaa maalin qurux badan oo tan oo kale ah. Waxaan kuugu mahad naqayaa nimcadaada iyo ilaalinta noloshayda. Qorniinku wuxuu leeyahay waa naxariista Rabbi inaan la baabbi'in. Waan kuugu mahadnaqayaa maxaa yeelay waxaad ahayd gaashaankayga iyo gaashaankayga, magacaagu ha ku sarreeyo magaca Ciise.
Sayidow, waan kuugu mahadnaqayaa maxaa yeelay maanta waad ii roonaan doontaa. Waan ku weyneynayaa maxaa yeelay waxaad keeni doontaa in xataa cadaawayaashaydu ay ila nabdoonaan. Waan ku weyneynayaa sababta oo ah foosha iyo dhib ayaa noloshayda maanta laga saari doonaa, magacaaga ha lagu sarreeyo magaca Ciise.
Aabbow, waayo, waa qoran tahay, Rabbiyow, waxaad barakeysaa kuwa xaqa ah; Waxaad iyaga ku hareerayn doontaa raallinimadaada sida gaashaan oo kale. Waxaad ballanqaadday inaad igu hareerayn doonto raalli ahaanshahaaga, waxaan ku dhaqaajiyaa ballanqaadka noloshayda maanta magaca Ciise.
Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad raalli iga ahaato. Meel kasta oo aan u weecdo laga bilaabo maanta, raalli ahaanshahaagu ha ku bilaabo inuu iigu hadlo magaca Ciise. Meel kasta oo la igu diiday, meel kasta oo wanaagsan oo lagu qoslay, waxaan ku amrayaa inaad raalli ka tahay inaad igu hadasho magaca Ciise.
Sayidow, albaab kasta oo barako ah oo iga soo horjeedda ayaa iga dhigaya inaan u shaqeeyo sidii maroodiga oo aan lahayn wax natiijo ah oo yar ama aan lahayn si aan u muujiyo, waxaan ka baryayaa in nimcadu beddesho halgankayga maanta magaca Ciise.
Sayidow, Qorniinku wuxuu leeyahay, Cadhadiisu waxay joogtaa daqiiqad keliya, Laakiinse raallinimadiisu weligeedba way sii waartaa. Oohintu waxay u hoyan kartaa habeenka, laakiin farxaddu waxay timaadaa subaxdii. Sayidow, ilmadaydii way dhammaatay. Xanuunkii iyo caydaydii ayaa maanta ku dhammaaday magaca Ciise.
Aabbow, waxaa qoran, Waayo, Rabbiga Ilaaha ahu waa qorrax iyo gaashaan; Rabbigu wuxuu bixiyaa nimco iyo sharaf. Wax wanaagsan kaama celinayo kuwa socodkoodu qumman yahay. Waxaan baryayaa inaan wax wanaagsan la iga reebin. Waxaan ka baryayaa in Nicmada Rabbi ay bilawdo in la sii daayo duco kasta oo qufulan, horumar kasta oo la daboolay, magaca Ciise.
Qorniinku wuxuu leeyahay, Rabbiga Ilaahayaga ah raallinimadiisu ha dul joogto. noo hagaaji shuqulkii gacmaheenna, haa, hagaaji shuqulka gacmahayaga. Sayidow, shuqulkii gacmahaygu waa sarraysiiyey Rabbiga raallinimadiisa. Waxaan ku amrayaa awoodda jannada meheraddaydu inay ku hesho xawaare ka sarraysa magaca Ciise. Waxaan amar ku bixinayaa in nimcada Ilaah ay kor u qaadi doonto meheraddayda maanta magaca Ciise.
Aabbe Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad i xasuusato markaad u naxariisanayso dadkaaga. Waxaan diidey inaan ku sii socdo dhibka. Waxaan diidayaa inaan ku sii noolaado xanuun, waxaan amar ku bixinayaa in nimcada Rabbi iga soocdo dhibaatada magaca Ciise.
Sayidow, waxaan kaa baryayaa inaad raalli iga noqoto dadka. Sida ay Esther u noqotay boqorka ugu cadcad, waxaan kaa codsanayaa in raalli ahaanshahaagu uu jacaylkayga ku dhex beeri doono qalbiga dad waaweyn oo ka caawin kara aayahayga magaca Ciise.
Qorniinku wuxuu leeyahay waxaad u roon tahay kuwa is -hoosaysiiya. Aabbe, maanta hortayda ayaan isku hoosaysiinayaa si aan hortaada uga helo raallinimo, waxaan kaa baryayaa in raallinimadaadu maanta igu hesho magaca Ciise.
Sayidow, sidaad ugu dooratay Daanyeel inaad ka dhigto mid ka wanaagsan saaxiibbadiis, waxaan kaa baryayaa in raallinimadaadu iga fiicnaato dhammaan kuwa kula tartamaya magaca Ciise. Sayidow, ganacsigayga, waxaan ka baryayaa nimcada inay ka dhex muuqato dad badan. Nimcada ii sheegi doonta adduunka, waxaan kaa codsanayaa inaad igu siiso magaca Ciise.
Sayidow, laga bilaabo maanta, wax igu dhici maayo inaan sameeyo. Ma jiro wax wanaagsan oo igu adkaan doona inaan dhammaystiro maxaa yeelay waan kuu adeegaa. Waxaad tahay Ilaaha binu -aadmiga oo dhan, mana jirto wax aan suurtogal kuu ahayn inaad samayso. Aabbe, laga bilaabo maanta, adiga oo raalli ka ah, wax igu suurtoobi maayo inaan ku sameeyo magaca Ciise.
article PreviousQodobbada Salaadda ee Waxyaabaha Wanaagsan Oktoobar 2021
Next articleSalaadaha Axdiga ee Horumarka
Christine Oktoobar 7, 2021 11: 35 am
Magaca Ciise waxaan ku weydiisanayaa raallinimo bogsashada magaca Ciise
Akhrinta Kitaabka Qudduuska ah ee Maalinlaha ah 3-da Noofambar 2018.
Qodobbada Salaadda ee Ka Soo Horjeeda Albaabada Xiran
20 Qodobbada Salaadda ee loogu talagalay Nabadda Gudaha ee Rabshadda
Salaadiinta Ka Soo Horjeeda U Adeegsiga Dadka Kale Riyada